‘अनपरफेक्ट’ सम्बन्धहरू :: निरू त्रिपाठी :: Setopati
सानोमा नेपालको झण्डा, नेपालको नक्सा परफेक्ट’ अर्थात् उत्कृष्ट वा पूर्ण बनाउन साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो। उस्तै उस्तै बनाए पनि दुरूस्तै बनाउन सकिरहेको हुन्थेन। दुरूस्तै बनाउन नजान्नु नै उत्कृष्ट नहुनु थियो। त्यसैले कम नम्बरसँगै नट परफेक्ट’ भनेर शिक्षकको कमेन्ट आउँथ्यो।
पछिपछि धेरै चित्रकला प्रदर्शनमा दर्शक भएर जान थालियो। त्यही दर्शक भएर जाने क्रममा त्यहाँ नेपालको नक्सा, झण्डा वा अरू कयौं चित्रहरू देखिरहेको स्वरुप भन्दा भिन्नै आकारको हुन्थे। ती चित्रकलाहरु अतरंगी हिसाबले प्रस्तुत गरेको देख्दा अचम्म पनि लाग्थ्यो। न त्यो चित्र दुरूस्तै नेपालको झण्डा जस्तो थियो न त दुरूस्तै नेपालको नक्सा जस्तो। तर पनि मानिसहरु धेरैबेर घोरिएर हेर्दै थिए ‘परफेक्ट’ आर्ट भन्दै आश्चर्य चकित भइरहेका थिए। अनि लाग्थ्यो ‘परफेक्ट’ हुन दुरूस्तै हुनुपर्छ भन्ने रहेनछ। अनुकृष्ट देखिएका धेरै चीजहरु भित्र पनि उत्कृष्टता देखिदो रहेछ।
उत्कृष्टताको मापन यही नै हो भनेर यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ। यस कुरालाई कसले कसरी हेर्छन्, कसरी बुझ्छन् र कसरी सोच्छन् भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ। मानिसमा पनि त्यही लागू हुन्छ। हरेक सम्बन्ध परफेक्ट नै हुनुपर्छ अनि मात्रै जीवन सरल हुन्छ भन्नु हुँदैन। कहिलेकाँहि परफेक्ट देखिरहेको सम्बन्ध अनपरफेक्ट भइरहेको हुन्छन् भने कुनै अनपरफेक्ट देखिएका सम्बन्ध परफेक्ट हुने प्रयासमा गइरहेको हुन्छ।
यसो भनिरहँदा यो कुरा पनि हामीले विर्सनु हुँदैन कि, संसारमा सबै जना एक उद्धरणसहित वा उद्धरणबिनानै पूर्णतावादी हुन्। हरेक व्यक्तिहरू आ–आफू हुन्। सबैको आ-आफ्नो सहअस्तित्व हुन्छ। एउटाको अस्तित्व अर्कोसँग नमिल्दैमा त्यो व्यक्ति अपूर्ण नै हो भन्ने हुँदैन। अपूर्णतामा पूर्णता खोज्नु पनि जीवनको ठूलो उपलब्धि हो। हामी स्वयंम् व्यक्ति त अपूर्ण छौं भने हामीसँग जोडिएका अरू व्यक्तिहरु चाँहि पूर्ण होस् भनेर कल्पना गरिरहनु मूर्खता हो।
समाजमा आफूसँग जोडिएका कयौं सम्बन्धहरू आफ्नो स्वभावसँग दुरूस्तै भइदिए नि हुन्थ्यो, ३२ गुण मिल्दा पनि हुन्थ्यो भनेर कल्पना गर्छौं। यसरी कल्पना गर्न पाइन्छ। परफेक्टिजम अर्को व्यक्तिमा खोज्न सकिन्छ। प्रयास निरन्तर जारी राख्दा पनि हुन्छ। तर सोचाईँलाई जिद्दी बनाउनु हुँदैन। कल्पनालाई नै अन्तिम सत्य ठान्नुहुँदैन।
म स्वयं एक व्यक्ति त पूर्ण छैन भने अर्को व्यक्ति पूर्ण नै हुनुपर्छ भनेर वाल हठ गर्नुहुँदैन। म मा भएका अपूर्णतालाई अर्को व्यक्तिले भरिदिने हो र अर्को व्यक्तिसँग भएको अपूर्णतालाई मेरो पूर्णताले भरिदिने हो। कहिलाकाँहि एकअर्काले भरिदिदाँ पनि खालि ठाउँ हुन सक्छ तर त्यो हाम्रो दुवैको दायित्व हो भनेर अघि बढ्नुपर्छ। नत्र कुनै सम्झौता विना नै उत्कृष्टता नै अन्तिम सत्य ठानेर त्यही तत्व एकअर्कामा खोज्दाखोज्दै सम्बन्धहरु कहिल्यै परफेक्ट नै हुन पाउँदैन।
यस्तो कल्पनाले मानिसलाई सही तरिकाले सम्बन्ध निर्वाह गर्न दिँदैन। अनि ती सम्बन्धहरू ‘अनपरफेक्ट’ को ट्यागमा नै झुण्डिएर अन्त्य हुन्छ। त्यो सम्बन्ध आमाबुबासँग होस्, जुम्ल्या दिदीबहिनी, दाजुभाइ, श्रीमानश्रीमती, सासुससुरा, जेठाजुजेठानी, देवरदेउरानी, साथीसंगी, छिमेकी, ब्वाईफेण्ड–गर्लफेण्ड वा सँगै काम गर्ने अफिसका साथीहरुसँग नै किन नहोस्।
ल! एकछिनलाई मानिलिउँ दुई व्यक्ति एकअर्काको स्वभावसँगै दुरुस्तै मिल्छ। अनुहार पनि दुरुस्तै मिलेको देखिन्छ, विचार, बानिव्यहोरा सबै उस्तै उस्तै छ। एउटै विषय, एउटै कलेज, एउटै पढाइको लेबल, एउटै चर्चाको शिखर, एउटै कार्यक्षेत्र, पद, मान–प्रतिष्ठा सबै उस्तै छ। एउटा ऐनासँगको जस्तो सम्बन्ध छ दुई व्यक्तिको। अब सोचौँ के ऐना जस्तो सम्बन्ध पनि परफेक्ट हुन्छ, उत्कृष्ट हुन्छ?
एकपटक सिंहलाई लागेछ यदि मेरो श्रीमती पनि म जस्तै गर्जन सक्ने र म जस्तै आत्मबल भइदिएको भए हामी दुवै कति पूर्ण हुन्थ्यौ होला। यो जंगलले एउटा उत्कृष्ट राजा रानी पाउँथे। मैले एउटा परफेक्ट जीवनसाथी पाउँथे। यही सोच्दासोच्दै सिंह इनारमा पुगेछ।
इनारको छेउमा खुट्टा राखेर तल हेरेछ। इनारको पानीमा आफ्नो जस्तै अनुहार देखेपछि सिंह खुशी पनि भएछ। सिंह लजाएछ अनि पानीको त्यो छायाँ पनि लजाएछ। सिंह अलि रिसाएजस्तो गरेछ अनि छाँया पनि रिसाए जस्तो गरेछ। सिंह बेक्सरी गर्जेछ अनि छायाँ पनि त्यसरी गर्जेछ। अब सिंहलाई रिस उठेछ। उसले छायाँलाई गाली गर्‍यो र भन्यो –तँ आफू आफू भएर बस। तँ आफ्नो पाराले गर्जेस्। म जस्तो हुने कोसिस नगर। म एक हुँ यो जंगलको। तँ एक होस् यो इनारको। सिंहले यस्तै यस्तै भनिरहँदा सिंहिनी सिंहको नजिक आएर भनिछ– राजा, म पनि त एक हुँ। मेरो पनि त आफ्नै अस्तित्व छ। तपाइँको आफ्नै छायाँ त तपाइँ जस्तै हुँदा तपाइँलाई रिस उठ्यो भने भोलिको दिनमा म फेरि तपाइँ जस्तै भए भने झन् हाम्रो सम्बन्ध कस्तो होला? तपाइँसँग जे छ त्यो मसँग पनि हुनु पर्छ भन्ने छैन। अनि म सँग जे छ त्यो तपाइँसँग पनि हुनुपर्छ भन्ने छैन। उस्ता उस्तै भएर पूर्ण हुने होइन। बेग्ला वेग्लै भएर पनि अपूर्ण हुने होइन। हामी एकअर्काको अपूर्णतालाई स्वीकारेर हिँड्डा पूर्णता मिल्न सक्छ। सिंहीनीको यस्तो विचार सुनेर सिंह मख्ख पर्दै घर जान्छ। त्यसैले यो कथाले यो पनि भन्छ कि वास्तवमा उत्कृष्ट देखिनु पनि उत्कृष्ट होइन।
हामी आफैं दिनमा कतिपटक ऐना हेर्छौ र कतिपटक आफैंलाई गुनासो गर्छौं। ऐनाको अगाडि आफूजस्तै उभिएकोमा पनि हामी खोट भेट्छौ। आफ्नै रुप नमिलेको जस्तो लाग्छ। आँखाको ठाउँमा आँखा, नाकको ठाउँमा नाक, ओठको ठाउँमा ओठ नै भइदिदा पनि चित्त बुझ्दैन। यदि ऐना हेर्दा पनि त आफूले आफूमा पूर्णता भेट्दैन भने मसँग जोडिएको व्यक्ति म जस्तै हुनुपर्छ भनेर जिद्दि गरिरहँदा के त्यहाँ पूर्णता भेटिन्छ ? के सिहँले आफ्नै छायाँ देख्दा पनि सन्तुष्ट भयो त?
यदि मान्छेको अगाडि स्वयंम् पूर्ण मानिएको भगवानको स्वरुप अगाडि आइपुग्यो भने पनि हामीलाई अपूर्ण लाग्दछ। यदि मानिसहरुको दुई वटा आँखामध्ये तीन वटा आँखा भइदिएको भएँ! यदि भगवान शिवको पनि मान्छेको जस्तै दुई वटा मात्रै नेत्र भइदिएको भएँ! यदि मानिसहरुको नाकको ठाउँमा गणेश भगवानकै जस्तो सुड भइदिएको भएँ! यदि स्वयंम् भगवान गणेशको पनि सुड नभएर सधैँ मान्छेको जस्तै नाक भइदिएको भएँ! यदि मान्छेको पनि देवीहरुको जस्तै पछाडि थुप्रै हातहरु लिएर जन्मेको भए!
अनि देवी माता पनि दुई वटा मात्रै हात भइदिएको भएँ! के हामीलाई भगवान र मानिस दुवै पूर्ण लाग्थ्यो? स्वयंम् मानिसहरु भगवानकै स्वरुप लिएर जन्मदाँ पनि किन उ पूर्ण हुँदैन? अनि भगवान पनि सामान्य मानिसहरु जसरी सदैव भइँदिदाँ हामी किन भगवानकै उत्कृष्टतामा शंका गर्छौ?
हामी चाहन्छौं नाकको ठाउँमा नाकै होस् सूड होइन। सूड त हात्ति वा भगवान गणेशको मात्रै हो। हामी चाहन्छौं हामी सबैको दुई वटा आँखा मात्रै होस् तीन वटा त भगवान शिवको मात्रै हो। चारवटा हात देवीहरुको मात्रै हो। हामी चाहन्छौ भगवान भगवानकै स्वरुपमा रहोस्। हामी चाहन्छौ मान्छे मान्छे कै स्वरुपमा रहोस्। हामी चाहन्छौ संसारमा हरेक चिजको अस्तित्व जस्तो प्रकृतिले दिएको छ त्यस्तै होस्।
तर किन आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु चाँहि आफू जस्तै होस् भनेर सोच्छौ। मैले भनेको अनुसारले चलोस् अनि मात्रै परफेक्ट हुन्छ भनेर सोच्छौ ?हामीले किन विर्सन्छौ मसँग जोडिएको व्यक्तिको पनि आफ्नो छुट्छै अस्तित्व छ। हामी किन दम्भ पाल्छौ कि उसको मौलिक स्वभाव पनि मेरो स्वभावसँग मिल्नै पर्छ भनेर। किन जरुरी ठान्छौ कि उ ममा समाहित हुनै पर्छ , उ ममा मिसिनु नै पर्छ अनि मसँगै पेलिनु नै पर्छ ?
तर हामीले कहिल्यै सोच्दैनौ कि यसरी जो जस्तो हुन्छ उसलाई त्यसरी नै न स्वीकार्दा, एकअर्कालाई जर्वजस्ती आफूजस्तै हुनुपर्छ भनेर दवाव दिँदा कोदो र तोरीको जस्तो कथा बन्न पुग्दछ जसले सम्बन्धमा दुघर्टना ल्याउन पनि सक्छ।
एक दिन कोदोलाई लागेछ तोरी पनि मेरो जस्तै आकार छ। यदि हामी उत्कृष्ट हुनु छ भने अनि सबैले हामीलाई परफेक्ट देख्नु छ भने हामी दुवै एउटै भएर पिल्सिनुपर्छ। जबसम्म एउटै भएर पिसिदैनौ तबसम्म हाम्रो सम्बन्ध पूर्ण हुँदैन। कोदोले तोरीलाई जर्वजस्ती भए पनि आफूसँगै पिल्सिन निरन्तर दवाव दिइरह्यो। अन्त्यमा तोरी कोदोसँग मिसिन राजि भयो। उनीहरु एक भएर, पूर्ण हुन घट्टमा पिसिन गएँ तर अन्त्यमा घट्ट नै विग्रियो। पिसिदाँ न कोदो निस्कियो न त तोरी नै।
त्यसैले हरेक चिजको गुण फरक फरक हुन्छ। एकअर्कामा परफेक्ट हुन। एकअर्काको लागि उत्कृष्ट बन्न एकअर्काको स्वभावमा नै ढल्किनु पर्छ भन्ने छैन। यदि कोदो आफ्नै तरिकाले पिधिँएिको भए अनि तोरी पनि आफ्नै तरिकाले पेलिएको भएँ। कोदो कोदो भएर निस्किन्थ्यो अनि तोरी तोरी भएर। छुट्टा छुटै भएर निस्किए पछि पनि धमण्ड तोडेर, जिद्दिपन छोडेर, इगो साइडमा राखेर पूर्ण हुने प्रयासमा यदि एकअर्कालाई सहयोग गरेर तोरीको तेलमा कोदोको रोटि पकाएको भए सायद केही मात्रमा भए पनि स्वादिलो हुन्थ्यो।
कु-पदार्थ भएर निस्किनु पर्दैनथ्यो। अनि घट्ट पनि विग्रदैन्थ्यो। कहिले काँहि आकार मिलेको चिजहरु प्नि एकअर्काको लागि परफेक्ट नहुन सकिन्छ तर यदि त्यही चिजलाई अलगअलग प्रशोधन गरेर पछि मिलाएर उपयोग गर्दा त्यो दुवै चिजको अस्थित्व कायम रहन्थ्यो र दुवैको मानसम्मान कायम रहन्थ्यो।
त्यसैले पूर्णता–अपूर्णताको कुनै पनि स्तरलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। पूर्णतावादी भनेको आत्म–स्वीकृति हो। यदि पूर्णता पनि अपूर्णता छ र अपूर्णतामा पनि पूर्णता छ भनेर मनन जबसम्म हुँदैन तबसम्म अनुहार र स्वभाव मिलेर पनि सम्बन्धहरु किनारा लागिरहेका हुन्छन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १५, २०७८, ०१:४०:००